VaTsvangirai Vanoita Musangano naVaMugabe Kuti Vazeye Zviri Kunetsa
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vakasangana kuZimbabwe House neChitatu vakazeya nyaya dziri kunetsa muhurumende yemubatanidzwa.
Vane ruzivo nezviri kuitika muZanu-PF neMDC vanoti vaviri ava vakataura nyaya yemhirizhonga yatekeshera munyika, nyaya yemari dzevashandi vehurumende, nyaya yemangoda uye danho rakatorwa nemutungamiri mutsva weMDC diki, VaWelshman Ncube, rekuti ndivo vava kutora basa rayiitwa naVaArthur Mutambara muhurumende.
Zvinonzi VaMugabe vakaratidza kunetsekana nezviri kuitika mubato raVaNcube, vachiti vachatanga vanzwa zviri kubva kumatare sezvo paine vamwe vari kupikisa masarudzirwo akaitwa hutungamiri muMDC inotungamirwa naVaNcube.
Zvinonzi VaTsvangirai vakaudzawo VaMugabe kuti vainge vanzwa negurukota rezvemari, VaTendai Biti, kuti hapana mari iri kuuya kuhurumende kubva kumangoda ari kucherwa kwaMarange.
Panyaya yemhirizhonga, VaTsvangirai vanonzi vakati havasi kufara kuti vatsigiri vavo vari kushungurudzwa nevatsigiri veZanu-PF zvikuru muMbare mapurisa achitadza kuvadzivirira.
Rimwe gurukota rezvemukati menyika, VaKembo Mohadi, vaudza Studio7 kuti vari pazororo uye havasati vapirwa nyaya iyi.
NeChitatu muzinda weguta reHarare wakavharwa vashandi vachiti vaitya kurohwa nevatsigiri veZanu-PF. Ukuwo veZanu-PF vanoti vaida kutadzisa VaTsvangirai kuti vasakurudzire vanhu kuti vapinde mumigwagwa sezviri kuitika kuEgypt.
Sachigaro wevechidiki muZanu-PF muHarare, VaJim Kunaka, ndivo vanonzi vaitungamira vechidiki veZanu-PF ava. Asi varamba kuti vakaita izvi pavataura neStudio7
Vanoshanda neMedia Monitoring Project, VaEdwin Madondo, vanoti mapepanhau ehurumende akaita seHerald anodyidzana neZanu-PF ave kureva nhema achiti VaTsvangirai vari kuda kuti vanhu varatidzire sezviri kuitika kuEgypt.
Hurukuro naVaEdson Madondo